Apple dia namoaka ny Beta 4 an'ny watchOS 4.3 ho an'ny Developers | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka beta 4 an'ny watchOS 4.3 ho an'ny mpamorona
Minitra vitsy lasa izay dia natolotr'i Apple teo am-pelatanan'ny mpamorona ny watchOS 4 beta 4.3 ho an'ny mpamorona. Amin'ity kinova beta vaovao ity dia ahitantsika ny fanatsarana mahazatra sy ny fanamboarana bibikely, ary tonga roa herinandro aorian'ny fandefasana ny kinova taloha, toy ny sisa amin'ireo kinova izay navoaka omaly ho an'ireo mpamorona macOS sy iOS.
Amin'ity tranga ity, ny kinova beta fahefatra dia manampy fanatsarana bebe kokoa maody alina miaraka amina mitsivalana ny famantaranandro, dia vita marindrano ankehitriny rehefa mamoaka. Amin'io lafiny io, nisy fanatsarana sasany koa nanampy ny interface interface amin'ny famantaranandro ary mamaly ary ilay kinova 4.3 dia misy vaovao mahaliana.
Apple dia tsy te-hanampy fanovana be loatra indray mandeha ao amin'ireo kinova vaovao ary mamonjy taratasy ho an'ny volana Jona, fa ny vaovao, na kely aza, raha ny fahombiazan'ny smartwatch dia raisina an-tanana hatrany. Araka ny ilazantsika fa misy fiovana eo amin'ny interface tamin'ny voalohany ny kinova beta 4.3 navoaka, amin'ny maody amin'ny alina, amin'ny sasany amin'ireo angon-drakitra hetsika, amin'ny fanangonana batterie ary ny sary mihetsika vaovao rehefa mametraka ny famantaranandro ho tompon'andraikitra.
Amin'ireto kinova beta ireto dia tsara kokoa ny mijanona eo amin'ny sisiny mba hisorohana olana, ary izany dia amin'ny Apple Watch dia tsy misy safidy hametrahana kinova taloha raha vao manavao ianao. Amin'io lafiny io dia mety hahafaty ny mpampiasa ny lesoka rehetra, avela tsy hampiasaina ilay fitaovana, toy izany hatrany ny tolo-kevitra aza miala amin'ireo kinova beta ireo ary avelao ny mpamorona hitsapa azy ireo ary zahao aminay ny vaovaonao. Ho an'ny Apple Watch dia tsy misy kinova beta ho an'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple dia namoaka beta 4 an'ny watchOS 4.3 ho an'ny mpamorona